Dental Care – Page 8 – Healthy Life Journal
ရွှေသွားအစွပ် ဖယ်ချင်တယ် . .
မေး. ရွှေသွားအစွပ်စွပ်ထားတာပါ။ အဲဒီရွှေရောင်ကို မကြိုက်တော့လို့ဖယ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါသလဲ။ ဦးသစ်လွင်၊ အလုံ။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးသည်။ ဖြေ. အရင်တုန်းကရွှေသွားကို လှတယ်ထင်ပြီးလုပ်ကြတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာကျတော့ရွှေသွားက သဘာဝသွားနဲ့မတူဘူး၊ ပြူးတူးပြဲတဲဖြစ်နေမယ်၊ အဲဒီတော့သွားရဲ့ သဘာဝအရောင်အတိုင်း သွားစွပ်ပေးကြပါတယ်။ လှအောင်စွပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ သွားပိုးစားနေတယ်၊...
မေး. သွားဆေးခန်းကို သွားပြရမှာကြောက်နေပါတယ်။ ဘီပိုး၊ စီပိုးနဲ့ HIV ပိုးတွေကူးမှာစိုးလို့ပါ။ သွားဆေးခန်း သွားပြရင် ပိုးတွေကူးနိုင်ပါသလားဆရာ။ မော်မော်စန်း၊ မိတ္ထီလာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွားဆေးခန်း၊ သွားဆရာဝန်တို့ဆိုတာ ဘာကိုအထူးဂရုစိုက်ရသလဲဆိုရင် Infection Control...
HIV ရှိကြောင်းပြောလို့ သွားရောဂါကုမပေးတာ ကြုံဖူးတယ် . .
မေး. ကျွန်တော် HIV ရှိသူပါ။ တစ်ခါက သွားဆေးခန်းသွားပြတော့ ကျွန်တော်က HIV ရှိကြောင်း ပြောလိုက်တဲ့အခါ ကုမပေးတာ ကြုံဖူးပါတယ်။ အဲဒီတော့ နောက်တစ်ခါသွားဆေးခန်းသွားပြရင် HIV ရှိကြောင်းမပြောဘဲ နေရမှာလား။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ မင်းဆွေ၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့်...
သွားနုတ်တာ၊ သွားအကြောထုတ်တာ၊ သွားကျောက်ခြစ်တာတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး မရချင် . .
မေး. သွားနုတ်တာ၊ သွားအကြောထုတ်တာ၊ သွားကျောက်ခြစ်တာတွေက အခန့်မသင့်ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါသလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွားနုတ်တယ်၊ သွားအကြောထုတ်တယ်၊ သွားကျောက်ခြစ်တယ် . . ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါ...
ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် သွားခိုင်သည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ပါ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) လူအများကြားတွင် ကွမ်းစား၍ သွားခိုင်သည်ဆိုသော အယူအဆတစ်ခုရှိခဲ့ရာ ကွမ်းစား၍ သွားခိုင်သည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ဘဲ ကွမ်းစားပါများလျှင် သွားဖုံးရောင်ခြင်းနှင့် သွားနဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး သွားနုတ်ရတတ်ကြောင်း မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်က Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ကလေးတွေက ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ငယ်သွား လဲလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ကလေးတွေမှာ ငယ်သွားနဲ့ ကြီးသွားဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ “လူငုပ်တုပ်၊ သွားငုပ်တုပ် ဆိုသလို ငယ်သွားက အသက်ခြောက်လအရွယ်မှာ...
Q. ကျွန်တော် အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြီးအရွယ်ဖြစ်လို့ ပါးစပ်ထဲက သွားတွေ ယိုင်နဲ့တာ၊ သွားဖုံးတွေ အခြေအနေ မကောင်းတာ၊ သွားဖုံးရိုးတွေ တောင့်တင်းမှု မရှိတော့တာတွေ တွေ့ကြုံမှာ စိုးကြောက်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ၊ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို...
မေး. ကျွန်တော် အသက် ၆၀ကျော်ဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်မသောက်၊ ကွမ်းမစား၊ အရက်မသောက်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက သွားတစ်ချောင်းကို အကြောထုတ်ဖို့ အောက်တိုဘာလမှာ တစ်ကြိမ်၊ အကြောထုတ်စဉ် တစ်ကြိမ် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို သွား တစ်ချောင်းကို ဓာတ်မှန်ကြိမ်ဖန်ရိုက်လို့ သွားဖုံးကင်ဆာ...
သွားချေးဖတ်ကို သဘာဝနည်းဖြင့် ဖယ်ရှားနည်းသုံးသွယ်
၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ သွားတွေပေါ်မှာ ဘက်တီးရီးယား အလွှာတွေ ကပ်ငြိနေတဲ့အခါ သွားချေးဖတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သကြားပါတဲ့ မုန့်ပဲသရေစာတွေကို များများစား လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် သွားချေးဖတ် ဖြစ်နှုန်း များတတ်ပါတယ်။ သွားချေးဖတ်တွေ ထူထဲလာရင် သွားပိုးစားတာနဲ့ သွားဖုံးရောဂါတို့လို ပြဿနာတွေ...